Qabatinka ciyaarka kombiyuutaradda oo loo diiwaan gelin doono siddii cudur oo kale | Somaliska
Qabatinka ciyaarka kombiyuutaradda oo loo diiwaan gelin doono siddii cudur oo kale
Ciyaarta inta badan loo adeegsadoo xagga kombiyuutarada ee “computer game-ka” ayaa dhawaan la qorsheeysanayaa in laga dhigo cudur u baahan in la iska daweeyo. Hey’adda caalamiga ah ee caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano WHO, ayaa sidaasi shaacisay.
Afhayeenka la yiraahdo Tarik Jasarevik, ayaa sheegay in noocyada ciyaarahan ee dadku ku ciyaaraan kombiyuutarada iyo tv-yada ay hey’addu u aqoonsaneeyso dhawaan cudur islamarkaasina yahay nooc ka mid ah cuduradda ay diiwaan gelin doonaan. Wuxuu sheegay in qabitanka ciyaartan ee aaladaha kala duwan loo adeegsado ay yihiin kuwo aad u soo kordhay islamarkaasina leeyahay hanaan kale duwan oo ay ka muuqdaan xakameeyn la’aan. Tarik waxaa uu sheegay oo kale dhaqamada lugu arkay ciyaarahan la qabatimay yihiin ay natiijadooda xun tahay xilli laga bixiyey digniino hore.
Ugu dambeeyntiina Tarik waxaa uu sheegay ineey soo bandhig doonaan bisha lixaad ee sanadkan warbixino la xirriira amuurtan iyo xeer lugu qeexayo habka loola tacaalayo shaqsiyaadka qabatimay ee nolol maalmeedkoodu noqday ciyaarahan misna aan laheyn xad xakameeya. Sidoo kale ma aanu sheegin afhayeenkan dhibaatadda caafimaad darro ee uu leeyihiin ciyaarahan noocyadiisa kala duwan leh ee lagu ciyaaro aaladaha elektroonikada iwm.
Video: Waayeelka Soomaalida iyo Swedishka oo isdhexgal loo sameeyay